Sinoa nandratra mompera: Sinoa iray nidoboka am-ponja, iray hafa nahazo fahafahana vonjimaika
mercredi, 05 février 2020 09:24
Tazomina am-ponja vonjimaika ao amin’ny fonjaben’i Toliara ilay Sinoa namely totohondry ka nandratra an’i mompera Romuald, ao amin’ny Paroasy Sanfily-Toliara. Nahazo fahafahana vonjimaika kosa ny Sinoa lahy iray hafa, voalaza fa nandray ilay basy nanambana an’ny mompera.
Resaka fisongonana amin’ny fiara teny amin’ny lalana avy any Ifaty hiazo an’i Toliara, ny tolakandron’ny alahady 2 febroary 2020 no niandohan’ny olana.
Avy nitarika tanora maromaro nitsangatsangana tany Ifaty i mompera Romuald tamin’io alahady io, ka teny an-dalana nody no niharan’ny herisetra nataon’ireto Sinoa lahy ireto.
Nitondra fiara i mompera, nandeha fiara hafa ireo tanora niaraka taminy. Nitondra fiara ary nanao ankisisika hisongona ilay Sinoa lahy sady nampaneno klaxon. Nomen’ny mompera lalana izy rehefa nampaneno anjomara fanindroany. Vao avy tafasongona anefa dia najanon’ilay tovolahy Sinoa tampoka ny fiara nentiny. Nivoaka ny fiara ilay Sinoa, teo amin’ny familiana, ary nivatravatra fiteny nanantona an’ny mompera Romuald ary nilaza fa naninona hono izy no tsy homena lalana.
Vao nanazava i mompera dia totondry sy ambana basy no nasetrin’ilay Sinoa azy. Naratra i mompera. Nandritra izany no tonga ny fiara nitondra ireo tanora niara-dia tamin’ny mompera. Nisy ny nentin-katezerana nahita an’ny mompera naratra saingy nahatandrin-tena tsy nikasi-tanana an’ilay Sinoa.
Nosamborin’ny Zandary ary notazomina tao amin’ny biraon’ny Zandary natao famotorana ilay tovolahy ninia nandratra an’ny mompera. Omaly talata no natolotra ny Fampanoavana ny raharaha, ary dia fitanana am-ponja vonjimaika an’ilay Sinoa nanao fandratrana niniana natao no didy savaranonando nivoaka. Nahazo fahafahana vonjimaika kosa ilay Sinoa naka ny basy teny an-tanan’itsy voalohany.